Condom ကို ဘယျလို စနဈတကသြုံးမလဲ - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Condom တှဟော စနဈတကသြုံးတတျမယျဆိုရငျ သငျ့ကို မလိုခငျြတဲ့ကိုယျဝနျမရအောငျ တားဆီးပေးနိုငျရုံသာမက… . လိငျကတဆငျ့ကူးစကျတတျတဲ့ ရောဂါတှကေိုလဲ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ..။ ကှနျဒုံးတှကေို အရောငျစုံ… အနံ့စုံ… အရှယျအစားအစုံရနိုငျပွီး မိနျးမကိုယျသာမက စအိုနဲ့ ဆကျဆံခွငျးတှမှောလညျး သုံးလို့ရပါတယျ…။ ကိုယျဝနျရနိုငျခကြေိုလညျး 98% လောကျထိတားနိုငျတယျ ဆိုပါတယျ..။
ဒါပမေယျ့ သငျ့ရဲ့သုံးပုံသုံးနညျး မှနျကနျစနဈကဖြို့တော့ အရေးကွီးပါတယျ..။ အောကျမှာ ဖျောပွပေးမှာကတော့ ကှနျဒုံးတှကေို ဘယျလိုစနဈတကြ မှနျမှနျကနျကနျ အသုံးပွုမလဲဆိုတာပါပဲ..။
(1)	ကှနျဒုံးအိတျပျေါမှာရှိတဲ့ သကျတမျးကုနျဆုံးရကျနဲ့ ကှနျဒုံးပျေါမှာ အပေါကျအပွဲရှိမရှိသခြောစဈပါ..
ကှနျဒုံးအိတျ ဒါမှမဟုတျ ကှနျဒုံးမှာ အပေါကျအပွဲအပကျြအစီးရှိနတေယျဆိုရငျ … လုံးဝမသုံးသငျ့ပါဘူး.။ ပကျြစိးနတေဲ့ ဒါမှမဟုတျ သကျတမျးကုနျနတေဲ့ ကှနျဒုံးကိုသုံးတာက မလိုခငျြတဲ့ကိုယျဝနျနဲ့ လိငျကတဆငျ့ကူးစကျတတျတဲ့ရောဂါဆိုးတှကေို လကျယပျချေါနသေလိုပါပဲ..။
(2)	အထုပျကို သခြောဖှငျ့ပွီး ကှနျဒုံးကို ထုတျပါ
ကှနျဒုံးထုပျကို ဂရုတစိုကျဖှငျ့ပွီးတဲ့အခါ သငျ့လကျနဲ့ သခြောထုတျယူပါ..။ သှားနဲ့ကိုကျဖောကျတာ…. ကတျကွေးနဲ့ညှပျပွီးဖှငျ့တာမြိူးဟာ ကှနျဒုံးကို ပကျြဆီးစနေိုငျလို့ ရှောငျသငျ့ပါတယျ…။
(3)	သငျ့လိငျတံမာအောငျစောငျ့ပွီး ကှနျဒုံးကိုစှပျပါ
ကှနျဒုံးကို စှပျတဲ့အခြိနျမှာ သငျ့လိငျတံ ထိုကျသငျ့သလောကျမာနပေါစေ..။ စှပျတဲ့အခါ ကှနျဒုံးနဲ့ သငျ့လိငျတံကွားမှာ လခေိုမနစေဖေို့အတှကျ ….. ကှနျဒုံးရဲ့ထိပျကို ဖိပွီးမှ ပှငျ့နတေဲ့ ကှနျဒုံးအဝကနေ သငျ့လိငျတံမှာစှပျပါ…။
(4)	ရဓောတျကိုအခွခေံတဲ့ ခြောဆီသုတျရငျသုတျပါ… ဆီကိုအခွခေံတဲ့ ခြောဆီ ဒါမှမဟုတျ ဆီမှနျသမြှကိုရှောငျပါ….
လိငျဆကျဆံခြိနျကွာတဲ့အခါ ပှတျတိုကျမှူတှဖွေဈပွီး မတျောတဆကှနျဒုံးပေါကျတာမြိူးဖွဈနိုငျပါတယျ..။ ဒါကိုရှောငျနိုငျဖို့ ရဓောတျကို အခွခေံတဲ့ ခြောဆီ ဥပမာ KY jelly လိုမြိူးကို သုံးပေးနိုငျပါတယျ…။ နောကျပိုငျးထုတျ ကှနျဒုံးတျောတျောမြားမြားမှာတော့ ခြောဆီပါတှဲရကျပါပွီးသားမို့ သီးသနျ့ခြောဆီမသုံးလဲရပါတယျ..။ အထူးသတိပွုရမှာကတော့ ဆီဓာတျကို အခွခေံတဲ့ ခြောဆီကို မသုံးမိဖို့ပါပဲ..။ သံလှငျဆီအပါအဝငျ ဘယျဆီကိုမှ မသုံးသငျ့ပါဘူး..။ ဒီလိုသုံးခွငျးဟာ ပိုပွီး ကှနျဒုံးကို လှယျလှယျကူကူ တောငျ ပေါကျစနေိုငျပါတယျ..။
(5)	လိငျဆကျဆံခြိနျတဈလြှောကျလုံး ကှနျဒုံးကိုသုံးပါ
သုတျရညျထှကျထှကျမထှကျထှကျ သငျလိငျဆကျဆံခြိနျတိုငျးကှနျဒုံးကို သုံးသငျ့ပါတယျ..။
သုတျရညျမထှကျပမေယျ့ အရညျကွညျမှာတောငျ သုတျပိုးပါနိုငျတဲ့အတှကျ ကှနျဒုံးမသုံးရငျ ကိုယျဝနျရနိုငျသလို ရောဂါပိုးတှကေူးစကျနိုငျလို့ လိငျဆကျဆံခြိနျအစကနေ အဆုံးအထိ ကှနျဒုံးကို မဖွဈမနသေုံးဖို့လိုအပျပါတယျ..။
(6)	ခြှတျတဲ့အခါ သတိပွုပါ
သငျလိငျဆကျဆံမှူ ပွီးဆုံးလို့ ဖွဈဖွဈ… လိငျဆကျဆံခြိနျ ကွာလို့ နောကျကှနျဒုံးတဈခုလဲတဲ့အခါဖွဈဖွဈ…ကှနျဒုံးကို ခြှတျတဲ့အခါ ကှနျဒုံးရဲ့ ကှငျးအမာဖကျကနေ အောကျကို ဖွေးဖွေးခငျြးဆငျးပွီး လကျတဈဖကျက သငျ့လိငျတံကိုကိုငျပွီး ဆှဲခြှတျပါ.။ ဒီလိုခြှတျတဲ့အခါ ကှနျဒုံးထဲက အရညျတှေ မလြှံထှကျသှားစဖေို့ ဂရုစိုကျပါ..။
(7)	အမှိူကျပုံးထဲ မပဈခငျခညျြပါ
ခြှတျပွီးတဲ့ ကှနျဒုံးကို ကှငျးအမာဖကျကနေ ပိတျခညျြပွီး အမှိူကျပုံးထဲကို စနဈတကစြှနျ့ပဈပါ..။ စှနျ့ပဈပွီးတဲ့နောကျ သငျ့လကျကို ဆပျပွာ ရတေို့နဲ့ သခြောသနျ့စငျပါ..။
တခြိူ့တှေ လှဲမှားစှာ ယူဆကွတာက ကှနျဒုံးနှဈထပျသုံးရငျ ပိုအန်တရာယျကငျးမယျလို့ ထငျကွတာပါပဲ..။ လကျတှမှေ့ာတော့ ဒါက ပိုမကာကှယျနိုငျတဲ့အပွငျ ကှနျဒုံးကို ပိုပေါကျလှယျစတောမို့ မလုပျသငျ့ပါဘူး..။
(9)	နောကျတဈကွိမျ လိငျဆကျဆံရငျ ကှနျဒုံးအသဈကိုပဲ သုံးပါ
တကယျလို့ သငျနဲ့ သငျ့အဖျောက နောကျတဈကွိမျလိငျဆကျဆံဖို့ ဆန်ဒရှိနတေယျဆိုရငျ …နောကျထပျ ကှနျဒုံးအသဈကိုသုံးပါ..။ သုတျရညျထှကျထှကျမထှကျထှကျ… ဘယျအခြိနျလိငျဆကျဆံမှူကိုလုပျလုပျ ကှနျဒုံးအသဈကိုသာ သုံးပါ..။ ဒါမှသာ အန်တရာယျနညျးပါးတဲ့ လိငျဆကျဆံမှူကို သငျပိုငျဆိုငျနိုငျမှာပါ..။
Condom ကို ဘယ်လို စနစ်တကျသုံးမလဲ
Condom တွေဟာ စနစ်တကျသုံးတတ်မယ်ဆိုရင် သင့်ကို မလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်မရအောင် တားဆီးပေးနိုင်ရုံသာမက… . လိင်ကတဆင့််ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေကိုလဲ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်..။ ကွန်ဒုံးတွေကို အရောင်စုံ… အနံ့စုံ… အရွယ်အစားအစုံရနိုင်ပြီး မိန်းမကိုယ်သာမက စအိုနဲ့ ဆက်ဆံခြင်းတွေမှာလည်း သုံးလို့ရပါတယ်…။ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေကိုလည်း 98% လောက်ထိတားနိုင်တယ် ဆိုပါတယ်..။
ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့သုံးပုံသုံးနည်း မှန်ကန်စနစ်ကျဖို့တော့ အရေးကြီးပါတယ်..။ အောက်မှာ ဖော်ပြပေးမှာကတော့ ကွန်ဒုံးတွေကို ဘယ်လိုစနစ်တကျ မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးပြုမလဲဆိုတာပါပဲ..။
(1)	ကွန်ဒုံးအိတ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်နဲ့ ကွန်ဒုံးပေါ်မှာ အပေါက်အပြဲရှိမရှိသေချာစစ်ပါ..
ကွန်ဒုံးအိတ် ဒါမှမဟုတ် ကွန်ဒုံးမှာ အပေါက်အပြဲအပျက်အစီးရှိနေတယ်ဆိုရင် … လုံးဝမသုံးသင့်ပါဘူး.။ ပျက်စိးနေတဲ့ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်နေတဲ့ ကွန်ဒုံးကိုသုံးတာက မလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်နဲ့ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါဆိုးတွေကို လက်ယပ်ခေါ်နေသလိုပါပဲ..။
(2)	အထုပ်ကို သေချာဖွင့်ပြီး ကွန်ဒုံးကို ထုတ်ပါ
ကွန်ဒုံးထုပ်ကို ဂရုတစိုက်ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါ သင့်လက်နဲ့ သေချာထုတ်ယူပါ..။ သွားနဲ့ကိုက်ဖောက်တာ…. ကတ်ကြေးနဲ့ညှပ်ပြီးဖွင့်တာမျိူးဟာ ကွန်ဒုံးကို ပျက်ဆီးစေနိုင်လို့ ရှောင်သင့်ပါတယ်…။
(3)	သင့်လိင်တံမာအောင်စောင့်ပြီး ကွန်ဒုံးကိုစွပ်ပါ
ကွန်ဒုံးကို စွပ်တဲ့အချိန်မှာ သင့်လိင်တံ ထိုက်သင့်သလောက်မာနေပါစေ..။ စွပ်တဲ့အခါ ကွန်ဒုံးနဲ့ သင့်လိင်တံကြားမှာ လေခိုမနေစေဖို့အတွက် ….. ကွန်ဒုံးရဲ့ထိပ်ကို ဖိပြီးမှ ပွင့်နေတဲ့ ကွန်ဒုံးအ၀ကနေ သင့်လိင်တံမှာစွပ်ပါ…။
(4)	ရေဓာတ်ကိုအခြေခံတဲ့ ချောဆီသုတ်ရင်သုတ်ပါ… ဆီကိုအခြေခံတဲ့ ချောဆီ ဒါမှမဟုတ် ဆီမှန်သမျှကိုရှောင်ပါ….
လိင်ဆက်ဆံချိန်ကြာတဲ့အခါ ပွတ်တိုက်မှူတွေဖြစ်ပြီး မတော်တဆကွန်ဒုံးပေါက်တာမျိူးဖြစ်နိုင်ပါတယ်..။ ဒါကိုရှောင်နိုင်ဖို့ ရေဓာတ်ကို အခြေခံတဲ့ ချောဆီ ဥပမာ KY jelly လိုမျိူးကို သုံးပေးနိုင်ပါတယ်…။ နောက်ပိုင်းထုတ် ကွန်ဒုံးတော်တော်များများမှာတော့ ချောဆီပါတွဲရက်ပါပြီးသားမို့ သီးသန့်ချောဆီမသုံးလဲရပါတယ်..။ အထူးသတိပြုရမှာကတော့ ဆီဓာတ်ကို အခြေခံတဲ့ ချောဆီကို မသုံးမိဖို့ပါပဲ..။ သံလွင်ဆီအပါအ၀င် ဘယ်ဆီကိုမှ မသုံးသင့်ပါဘူး..။ ဒီလိုသုံးခြင်းဟာ ပိုပြီး ကွန်ဒုံးကို လွယ်လွယ်ကူကူ တောင် ပေါက်စေနိုင်ပါတယ်..။
(5)	လိင်ဆက်ဆံချိန်တစ်လျှောက်လုံး ကွန်ဒုံးကိုသုံးပါ
သုတ်ရည်ထွက်ထွက်မထွက်ထွက် သင်လိင်ဆက်ဆံချိန်တိုင်းကွန်ဒုံးကို သုံးသင့်ပါတယ်..။
သုတ်ရည်မထွက်ပေမယ့် အရည်ကြည်မှာတောင် သုတ်ပိုးပါနိုင်တဲ့အတွက် ကွန်ဒုံးမသုံးရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သလို ရောဂါပိုးတွေကူးစက်နိုင်လို့ လိင်ဆက်ဆံချိန်အစကနေ အဆုံးအထိ ကွန်ဒုံးကို မဖြစ်မနေသုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်..။
(6)	ချွတ်တဲ့အခါ သတိပြုပါ
သင်လိင်ဆက်ဆံမှူ ပြီးဆုံးလို့ ဖြစ်ဖြစ်… လိင်ဆက်ဆံချိန် ကြာလို့ နောက်ကွန်ဒုံးတစ်ခုလဲတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်…ကွန်ဒုံးကို ချွတ်တဲ့အခါ ကွန်ဒုံးရဲ့ ကွင်းအမာဖက်ကနေ အောက်ကို ဖြေးဖြေးချင်းဆင်းပြီး လက်တစ်ဖက်က သင့်လိင်တံကိုကိုင်ပြီး ဆွဲချွတ်ပါ.။ ဒီလိုချွတ်တဲ့အခါ ကွန်ဒုံးထဲက အရည်တွေ မလျှံထွက်သွားစေဖို့ ဂရုစိုက်ပါ..။
(7)	အမှိူက်ပုံးထဲ မပစ်ခင်ချည်ပါ
ချွတ်ပြီးတဲ့ ကွန်ဒုံးကို ကွင်းအမာဖက်ကနေ ပိတ်ချည်ပြီး အမှိူက်ပုံးထဲကို စနစ်တကျစွန့်ပစ်ပါ..။ စွန့်ပစ်ပြီးတဲ့နောက် သင့်လက်ကို ဆပ်ပြာ ရေတို့နဲ့ သေချာသန့်စင်ပါ..။
တချိူ့တွေ လွဲမှားစွာ ယူဆကြတာက ကွန်ဒုံးနှစ်ထပ်သုံးရင် ပိုအန္တရာယ်ကင်းမယ်လို့ ထင်ကြတာပါပဲ..။ လက်တွေ့မှာတော့ ဒါက ပိုမကာကွယ်နိုင်တဲ့အပြင် ကွန်ဒုံးကို ပိုပေါက်လွယ်စေတာမို့ မလုပ်သင့်ပါဘူး..။
(9)	နောက်တစ်ကြိမ် လိင်ဆက်ဆံရင် ကွန်ဒုံးအသစ်ကိုပဲ သုံးပါ
တကယ်လို့ သင်နဲ့ သင့်အဖော်က နောက်တစ်ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံဖို့ ဆန္ဒရှိနေတယ်ဆိုရင် …နောက်ထပ် ကွန်ဒုံးအသစ်ကိုသုံးပါ..။ သုတ်ရည်ထွက်ထွက်မထွက်ထွက်… ဘယ်အချိန်လိင်ဆက်ဆံမှူကိုလုပ်လုပ် ကွန်ဒုံးအသစ်ကိုသာ သုံးပါ..။ ဒါမှသာ အန္တရာယ်နည်းပါးတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှူကို သင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ..။